दिनभरी अर्कै केटा संग सु;तेर आउथि राति एकलै सुत्थी – कस्ति नारि . एस्तोलाइ के भन्नु हुन्छ? – Hamro Nepali Samachar
Home/ समाचार/दिनभरी अर्कै केटा संग सु;तेर आउथि राति एकलै सुत्थी – कस्ति नारि . एस्तोलाइ के भन्नु हुन्छ?
श्रीमान र श्रीमतीबीच हुनुपर्ने सम्बन्ध भएन भन्दै एक पुरुष मिडियामा आएका छन । उनले संगै एउटै विस्तरामा हुँदा पनि आफुहरुबीच कुनै सम्बन्ध राख्न नचाहने श्रीमतीको ब्यवहार भने शंका लाग्दो रहेको श्रीमानको भनाई छ।
२ वर्ष सम्म त्यस्तो सम्बन्धमा रहेकी श्रीमती अहिले छोडेर हिँडेपछि श्रीमान मिडियामा आएका हुन् । उनीहरुको एक सन्तान पनि छन् । दुई वर्ष देखि आफुसंग सम्बन्ध राख्न नचाहेकी महिला गीता गाहा (वुटवल) हराएकी हुन्।
श्रीमती हराए पछि मात्र आफुले श्रीमतीको अरु कुनै पुरुषसंग सम्बन्ध रहेको थाहा पाएको बताएका श्रीमान घरमै भएको बेलामा उनी घर छोडेर हिँडेको बताए । त्यो दिन विहानै देखि यता र उता गरिरहेको थियो, उसको हिड्ने योजना रहेछ श्रीमान भन्छन्, हाम्रो बोलचाल राम्रोसंग नभएको २ वर्ष भएको थियो।
अर्कोसंग लागेर होला घरमा आएर सबैसंग वि वाद गर्ने गर्थिन, आमाबुवालाई खाना पनि पकाइदिन्थनन् । त्यही भएर बोलचाल नै थिएन । उनका श्रीमान ग्रिलको काम गर्ने गरेका छन् ।***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक